Imaaraadka oo Soomaaliya u soo bandhigay “gorgortan” ay ku…
Soomaaliya ayaa diiday “gorgortan” ay u soo bandhigtay dowladda Imaaraatka Carabta oo ku aadan in gobolka geeska Afrika uu ku biiro dagaalka Yemen si loogu helo dhiirrigelin dhaqaale, wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday.
Sida ay qortay Middle East Monitor.com, Imaaraadku wuxuu u yaboohay Soomaaliya in dib loo furayo Isbitaalka Sheekh Zayed oo ku yaal caasimada Soomaaliya ee Muqdisho hadii ay Soomaaliya ay ka qeyb qaadaneyso dagaalka Yemen, iyadoo si rasmi ah u sheeganeyso Jasiiradda Socotra in ay tahay dhul Soomaaliyeed.
Cusbitaalka Imaaraatka ee uu maamulo Sheekh Zayed ayaa daryeel caafimaad oo bilaash ah siijiray muwaadiniinta Soomaaliyeed waxaana shaqada uu joojiyay Sanadka 2018, taas oo qeyb ka ah xiriir diblumaasiyadeed oo u dhexeeya Abu Dhabi iyo Muqdisho oo xumaaday.
“Soomaalidu ma ahan aalad rakhiis ah oo loo adeegsado fulinta baahiyahaaga (…) Yemen waa deris iyo waddan walaalo ah, lehna madax-bannaanidiisa iyo karaamadeeda dadkeeda, ”Axmed Ciise Cawad ayaa yiri. “Caalamku wuu ogyahay in Socotra ay tahay dhul Yaman ah, isla markaana ay hore uga soo jirtay Dood ka taagneed, ”ayuu ku soo gabagabeeyey hadalkiisa wasiir Cawad.
Shacabka Soomaaliyeed ayaa rumaysan in Jasiiradda istaraatiijiga ah ee Socotra in ay tahay dhul Soomaaliyeed waxaana Soomaaliya ay ka codsatay UN-ka in lago’aamiso maqaalka jasiiradyo.
Sannadkii hore, Cawad wuxuu sheegay in cilaaqaadka dalkiisa uu la leeyahay UAE uusan aheyn heerkii loo baahnaa sida uu hadalka u dhigay.
Xukumadda Soomaalida ayaa sidoo kale sanadkii 2018 jabiyey shabakad lagu eedeeyay basaasiin oo malaayin dollar soo galiyay Magaaladda Muqdisho taas oo qayb qaadatay khilaafka Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta.
Si kastaba ha noqotee usbuucii la soo dhaafay, Imaaraadku waxa uu Soonaaliya u soo diray diyaarad gargaar ah gaar ahaan Jubbaland sidoo kale horay waxa uu diyaarado ugu soo diray Muqdisho, Hargaysa iyo Garowe, si ay u xoojiso dadaallada dalka ee lagu xakameynayo faafitaanka COVID-19.
Maxaa Xiligaan ku soo beegay Muranka Jasiiradaan?.
Jasiiradaan oo ah mid Istiraajiiti u ah Gacanka cadmeed iyo gobolka Geeska Afrika ayaa waxaa dhawaan ciidamo iyo Maraakiib u soo diray Xukumadda Imaaraadka Carabta iyo Isbahaysigeeda Yemen ee dagaalka kula jira Xuutiyiinta Yaman.
Xukumadda Turkiga ayaa falkaasi cambaaraysay talaabadaasi ku tilmaantay mid ki kicinaysa xiisada Gobolka.
Xukumadda Turkiga la aaminsanyahay in ay Imaaraadka ugu guulaysatay dagaalka Liibiya isla markaana lagu jabiyay ciidankii Generaal Khaliifa Xafter oo taageero ka helayay Ruush-ka, Imaaraadka, Sucuudiga iyo Masar.
Turkiga iyo Imaaraadka ayaa sidoo kale dagaal u galay Siyaasada Soomaaliya iyada Soomaaliya ay xariirka ugu wanaagsan la leedahay Xukumadda Turkiga oo garab istaag u muujisay Xukumadda Faderaalka Soomaaliya, inkastoo Imaaraadku galaan gal siyaasadeed ku guuleeyay Gobaladda Waqooyi, Puntland iyo Jubbaland.
Hadda waxaa Muuqata in Turkiga iyo Imaaraadku isku hayaan siyaasada Dalka Yemen oo mudo qasneed ayna isku hayaan Iran iyo wadamada Khiliijka Carabta.
Liibiya ka dib, Turkigu ma uga adkaan doonaa Imaaraadka Carabta dagaalka Yemen?.